ASA FANAOVAN-GAZETY: Melohina ny fanosoram-potaka an’ny MadaTopInfo – Madatopinfo
“Ny ekipan’ny gazety MadaTopInfo dia manambara an-kariary fa tsy nisy ary tsy misy ny vaovao izay lazaina fa apariaka amin’ity rohy ity (https://www.madatopinfo.com/?p=5346) ka mahasaringotra olona ambony amin’izao fotoana izao. Melohinay ny fanondroana ny fitaovan-tseraseranay ho namoaka io vaovao io izay foronina fotsiny io. Afaka manamarina ny site ny rehetra, azo atao ihany koa ny manamarina ny fomba fanoratray sy ny endrika vaovao izay navoakanay fa tsy mbola nentina nanapotehina fiainan’olona ny haino aman-jerinay. Ireo izay voatonona dia noezahanay nakana ny heviny mandrakariva ho fiarovantenan’ilay voapanga (pluralisme et richesse d’informations). Tsy natao fitaovana politika hanindraindrana olona na hanapotehana olona ny gazetinay. Midika izany fa mpisoloky ny manao fitaovana an’ny MadaTopInfo fa namoaka io vaovao io izay tsy misy akory ny rohy lazaina fa ahitana azy ary vonona hifanatrika amin’ny fahefana mahefa izahay amin’izao lainga afafy mikasika ny MadaTopInfo izao, raha ilaina izany. “ Misaotra ireo mpankafy sy mpiara-miombon’antoka ary manam-pahefana isan-tokony amin’ny fifampitokisana taminay.
Sary : Ny site mamiseho fa tsy mitombina ilay rohy (https://www.madatopinfo.com/?p=5346)
FIKAMBANAN’NY VEHIVAVY MPANAO GAZETY: Hiavaka ny fankalazany ny andron’ny 8 martsa amin’ity taona ity